Fangatahana ampanaovin’ny Papa Ray Masina – septambra 2019 – Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany – MADAGASIKARA
Mba hiara-miasa ho fiarovana ny ranomasimbe anie ny mpanao politika sy ny mpahay siansa ary ny mpahay toekarena
Mandritra ity volana septambra ity dia manasa antsika ny Papa hivavaka ho an’ny fiarovana ny ranomasina. Tafiditra indrindra amin’ny tetik’asa iombonana eran-tany amin’ny fiarovana ny tontolo iainana mantsy ny fikolokoloana sy ny fikajiana ny fahadiovan’ny ranomasina izay miantoka ny fahaveloman’ny olombelona sy ny zava-manan’aina eto ambonin’ny tany. Raha hazavaina amin’ny fomba tsotra ny mahazava-dehibe ny fiarovana ny ranomasina dia ampy ny maka ohatra tsotra nefa matanjaka : ny iray amin’ny olona roa velona dia noho ny ranomasina, izany hoe ny atsasaky ny olombelona eto ambonin’ny tany dia ny ranomasina sy izay rehetra momba azy no miantoka ny fahavelomany ; toraka izany koa ireo zava-manan’aina manodidina ny olombelona. Raha tsy hilaza ankoatra izay isika dia any anaty ranomasina no ahitana karazan-java-manan’aina be indrindra eto an-tany.
Afa tsy izany dia ampiasain’ny olombelona amin’ny lafiny maro ny ranomasina : fivezivezena, fifandraisana sy fifanakalozana ara-barotra, ka ilazana fa miantoka ny ampahany betsaka amin’ny lafiny ara-toekarena sy fandrosoan’ny firenena iray.
Ankehitriny anefa dia tandindomin-doza ny ranomasina sy izay misy ao aminy, noho ny fahapotehanan’ny tontolo iainana vokatry ny tsy fahafehezan’ny olombelona ihany ny tontolo manodidina azy. Ny fandoroana ny ala sy ny setroka ateraky ozinina mbamin’ny fiara isan-karazany dia miteraka ny fiovaovan’ny toetr’andro sy mampiakatra ny fisondrotry ny ranomasina. Ireo karazana fako simika tsy voafehy mivarina any an-dranomasina dia sady mandoto ny ranomasina no mamono ireo zava-manan’aina monina ao.
Ny Papa François ao aminn’ny ansiklika nosoratany, « Laudato si », dia manentana ary mampianatra antsika hanaja ny zavaboary izay harin-tanan’Andriamanitra sy ny tontolo manodidina azy.
Hoy indrindra ny Papa François raha nanentana sy nanao antso avo izy momba ny fiarovana ny ranomasina ny alahady 2 septambra lasa teo, izay andro maneran-tany natokana hivavahana ho fiarovana ny zava-boary, :
« Ny ranomasina dia tsy ny ampahany betsaka amin’ny ranon’ity planeta tany ity ihany, fa ny ankamaroan’ny zavamananaina mahatalanjona mihitsy no hita ao aminy, maro amin’ireo no atahorana ho ringana noho ny antony samihafa. Ny fahariana, hoy ihany ny Papa, dia tetik’asan’ny fitiavan’Andriamanitra ny zanak’olombelona. Ny firaisan-tsaintsika, ny firainkinantsika ao amin’ilay « tranobe iombonana » dia ateraky ny finoantsika.
Andao àry hivavaka isika amin’ity volana ity mba hiara-hiasa miaraka amin’ireo mpanao politika, mpahay siansa ary toekarena amin’ny fiarovana ny ranomasina sy ranomasim-be ».
Fanolorana ny andro, Hafatry ny Papa